Abalawuli bamaChina eHyn Dynasty - BC 202 ukuya ku-220 AD
Abalawuli baseTshayina baseHan
Ukususela kwi-BC 202 ukuya ku-220 AD, iNtsika yesiBini yaseTshayina
I-Han Dynasty yawulawula i-China emva kokuwa kobukhosi bokuqala bobukhosi, i- Qin ngo-206 BC Umsunguli we-Han Dynasty, uLi Bang, wayeyindwendwe ekhokelela ekuvukeleni unyana kaQin Shi Huangdi , umbusi wokuqala we-China owayenobumba bezopolitiko Umsebenzi wawufutshane kwaye uhlazo lwabahlobo bakhe.
Kwiminyaka engama-400 ezayo, ukungqubuzana kwabantu kunye nemfazwe, ukungquzulana kwentsapho yangaphakathi, ukufa ngokukhawuleza, i-mutinies, kunye nokulandelana kwemvelo kuya kugqiba imigaqo eya kubangela ukuba ubukhosi bube yimpumelelo enkulu kwezoqoqosho kunye nempi ngenxa yokulawula kwabo.
Nangona kunjalo, u-Liu Xis wagqiba ubukumkani obude be-Han Dynasty, ukunikezela kwixesha loBukumkani abathathu be-220 ukuya ku-280 AD, ngelixa ligcinwa ngamandla eHyn Dynasty yayidunyiswa njengeGold Age emlandweni waseTshayina - enye yezona ziTshayina ubudala .- ukukhokelela kwilifa elide labantu baseHan, abanobuninzi beentlanga zaseChina ezibikwe namhlanje.
Abasebenzi bokuqala baseHan
Kwiintsuku zokugqibela zeQin, uLi Bang, inkokeli yokuvukela uKu Qin Shi Huangdi wayitshitshisa inkokheli yakhe yokuvukela i-Xiang Yu emfazweni, okwenza ukuba i-hegemon ibe yimibuso engu-18 yezizwe zaseKhayina ezazisithembela kubo bonke ababalwayo. U-Chang'an wakhethwa njengenhloko-dolophu kunye no-Liu Bang, emva kokuthiwa ngu-Han Gaozu, wada wada wada wada wafa ngo-195 BC.
Umthetho udluliselwe kwisihlobo sikaBu Liu Ying de wafa emva kweminyaka embalwa ngo-188, edlulela eLi Gong (Han Shaodi) kwaye ngokukhawuleza waya eLi Hong (Han Shaodi Hong).
Ngo-180, xa u-Emporer Wendi ethatha itrone, wathi umda we-China kufuneka uhlale uvaliwe ukugcina amandla akhe akhula. Izibambano zezobuhlanga zenza ukuba umbusi olandelayo u-Han Wudi aguqulwe eso sigqibo ngo-136 BC, kodwa ukuhlaselwa okuhlukileyo kummelwane wasezantsi wase-Xiongu kubangele umkhankaso waminyaka emininzi wokuzama ukuphanga isisongelo esikhulu.
U-Han Jingdi (157-141) kunye noHan Wudi (141-87) baqhubeka le nkxalabo, bathatha iidolophana bawaguqulela kumaziko ezolimo kunye neendawo ezinqabileyo ezantsi kumda, ekugqibeleni baxinzelela i-Xiongu ngaphandle kommandla kwiNkqantosi yeGobi. Emva kokubusa kukaWudi, phantsi kolawulo lukaHan Zhaodi (87-74) kunye noHan Xuandi (74-49), i-Han ibutho yaqhubeka ilawula i-Xiongu, iwagxotha entshonalanga kwaye ifuna umhlaba wayo ngenxa yoko.
Ngethuba lokubusa kukaHan Yuandi (49-33), uHan Chengdi (33-7), kunye noHan Aidi (7-1 BC), uWeng Zhengjun waba nguMpress wokuqala waseChina ngenxa yeso sihlobo sakhe - isihloko sesigxina ngexesha lolawulo lwakhe olufunwa. Kwakungekade umntakwabo athathe isithsaba njengo-Emporer Pingdi ukususela ngo-1 BC ukuya ku-AD 6 ukuba wayelungele ukubamba kwakhe.
UHan Ruzi wamiselwa njengomlawuli emva kokufa kukaPingdi ngo-AD 6, nangona kunjalo, ngenxa yobuncinane bomntwana wakhethwa phantsi kokunyamekela kukaWang Mang, owathi wathembisa ukulahla ulawulo emva kokuba uRuzi efika eneminyaka yokulawula. Oku kwakungenjalo, kunoko nangona kukho umbhikisho omkhulu wabantu, wasungula i-Xin Dynasty emva kokumemezela isihloko sakhe sisiGunya seZulwini .
Ngo-3 AD kwaye kwakhona ngo-11 AD, ikhukula enkulu yahlasela amabutho ka-Wang ka-Xin ecaleni loMlambo oMnxantathu, echitha imikhosi yakhe.
Abahlali abahlala kuloo ndawo bajoyina amaqela avukelekileyo avukela u-Wang, ekugqibeleni ehlelwa phantsi kwe-23 apho iGeng Shidi (i-Gengshi Emporer) ezama ukubuyisela amandla ka-Han ukususela kuma-23 ukuya kwe-25 kodwa wafa waza wabulawa yiqela elivukelayo, i-Red Eyebrow.
Umzalwana wakhe, u-Liu Xiu - kamva u-Guang Wudi - wenyuka esihlalweni sobukhosi waza wakwazi ukubuyisela ngokupheleleyo i-Han Dynasty ngexesha lokulawula kwakhe ukususela kuma-25 ukuya ku-57. Ngeminyaka emibini, wayefudula waya eLoyoy kwaye wamnyanzelisa i-Red Eyebrow ukuba Ukunikezela nokuyeka ukuvukela. Kwiminyaka eyi-10 ezayo, walwela ukucima ezinye iindwendwe zamarhamente ezithiwa yi-Emporer.
Ixesha lokugqibela likaHan
Ulawulo lukaHan Mingdi (57-75), uHan Zhangdi (75-88), kunye noHan Hedi (88-106) babhekene neemfazwe ezincinci phakathi kweentlanga ezide zithandana nethemba lokuthi iNdiya yisezantsi kunye neAltai Mountains ngasentla.
Iintuthuko zezombusazwe nezentlalo zaxhaswa ulawulo lukaHan Shangdi kunye no-Han Andi owalandela esikhundleni sakhe, wafa umfazi wakhe ukuba amise unyana wakhe u-Beixiang kwisihlalo sobukhosi ngo-125 enethemba lokugcina intsapho yabo.
Nangona kunjalo, abo bathenwa abaye batyelwa nguyise wakhe ekugqibeleni baholele ekufeni kwakhe kwaye uHan Shundi wamiselwa ukuba abe ngukumkani ngaloo nyaka njengoMporer Shun kaHan, ukubuyisela igama likaHan ebukhosini benkosi. Abafundi beYunivesithi baqala ukuqhankqalaza ngokumelene nenkundla yamathenwa yaseShundi. Ezi mbhikisho zahluleka, zenze ukuba uShundi ahluthwe yinkundla yakhe kunye nokulandelelana ngokukhawuleza kukaHan Chongdi (144-145), uHan Zhidi (145-146) kunye noHan Huandi (146-168), ngamnye ozama ukulwa nomthenwa wabo abachasi ukuba bangabikho.
Kwada kwada kwafika uHan Lingdi ephoswe ngo-168 ukuba i-Han Dynasty yayiphume. U-Emperor Ling wasebenzisa ixesha elide lakhe nxaxheba kwiingqungquthela esikhundleni sokulawula, eshiya ukulawulwa kobukhosi kumathenwa uZhao Zhong noZhang Rang.
Abaphathi ababini bokugqibela, abazalwana bakaShaodi - iNkosana yaseHongnong - kunye noMlawuli wase Xian (owayenguLiu Xie) wabakhokelela ekusebenziseni iingcebiso zethenwa. I-Shaodi yilawula kuphela ngonyaka owodwa ngo-189 ngaphambi kokuba icele ukuba ilahle itrone yakhe ku-Emperor Xian, owawulawula kuyo yonke intsalela yeDynasty.
Ngo-196, i-Xian yathuthela inkunzi-xuchang kwi-Cao Cao-i-Yan yelizwe laseYan - kunye neengxabano zomphakathi ezaqhambuka phakathi kwezikumkani ezintathu ezilwa nokulwa nomlawuli omncinci.
Kwakusezantsi kweSun Quan, ngelixa uLi Bei elawulwa entshona kweChina neCao Cao wathatha umntla. Xa uCao Cao wafa ngo-220 kunye nendodana yakhe uCa Pi yaphoqeleka iXian ukuba ilahle umxholo wayo.
Lo mlawuli omtsha, uWen we Wei, wasusa ngokusemthethweni iHan Dynasty kunye nelifa lentsapho yalo kulawulo lwaseChina. Ngaphandle kwempi, kungekho nentsapho, kwaye akukho ndlalifa, lowo owayenguMporer Xian wafa ngokuguga waza wasuka e-China waya kumbambano wesithathu phakathi kweCao Wei, eMpuma Wu naseShuan Han, ixesha elibizwa ngokuba yi-Three Kingdoms.
Ingqungquthela yaseSt. Patrick, i-Patron Saint yase-Ireland
Iincwadi ezili-11 eziphezulu: Abafazi kwiMfazwe Yehlabathi yokuqala
Kutheni Kwafuneka IQin Shi Huangdi Ilungelwe NgamaStototta?
Nantsi enye yezoNxibelelwano zakudala zoMnqophiso kwiLizwe laMandulo
I-Great Leap Forward
Ngaba ama-300 aseSpartan abambe i-Thermopylae? Inyaniso emva kweThe Legend
Ukususela kwiBronze Age ukuya kwi-AD 500 - I-Ancient Eras
Kutheni Umbane Unobungozi?
Indima kunye neHolo
Iingcali zentlalo (SRs)
IsiFrentshi ISigama: KwiIhotele
Isikhokelo soFundo lweSizwe soVavanyo lweSifundo seSAT
Ngaba Iinkonzo Zabahedeni Zinemithetho?